Waa Ninka Keli ee ka Dheereyn Kara Mashiinta Wax Lagu Xisaabiyo | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — August 25, 2020
Waa Ninka Keli ee ka Dheereyn Kara Mashiinta Wax Lagu Xisaabiyo, laga yaabo adigaba inaadan is ogayn.
Waxaad Neelakantha Bhanu Prakash ku tilmaami kartaa Usain Bolt-ha xisaabta. Waxa uu jiraa 20 sanno, wuxuuna ku guleystay billad dahab ah mar uu ka qeyb galay tartanka xisaabaadka maskaxda.
Wuxuu sheegayaa in tartankaasi uu yahay ciyaaraha maskaxda kaasi oo meessha ka saarayo xabsida laga qabo xisaabta.
Wuxuu isbar-bardhigay dadka leh hibada xisaabta iyo dadka kale ee u tartama cayaraha kala duwan, waxa uu tilmaamay in aan inta badan diiradda la saarin dadka leh hibooyinka gaarka ah.
“Waxaan u dabaal-degeynaa dadka sida Usain Bolt marka uu 100 mitir ku jaro 9.8 ilbiriqsi.” Waxa uu sidaasi u sheegay BBC-Radio 1 Newsbeat. “Waxba looma sameeyo dadka kale si loogu dhiirageliyo waxa wanaagsan ee ay sameeynayaan, marka waxaa loo baahan yahay in dadka kale ee leh hibada gaarka ah loo sameeya dhiiragelin”.
Waad ku fakari kartaa Bhanu inuu u dhashay hibada uu leeyahay ee xisaabta balse sidaasi ma ahan. Waxaa hibadaan u horseedday, markii uu jiray 5 sanno wuxuu galay shil kaddibna mudda sannad ah oo uu sariir saarnaa ayuu waqti u helay xisaabta.
Sida dadka kale ee tarmada, Bhanu waxa uu guushiisa ku saleynayaa diyaarinta xisaabta. “Xifdinta xisaabta ma ahan in aad kursi fariisato oo barato, ee waa in aad masxkada si dhab ah uga shaqeysiiso”. “Iskumaan diyaarin in aan noqdo xisaabiye si deg-deg ah uga shaqeeya xisaabta, balse waxaan isu diyaariyay in aan si dhakhsiya u fakaro.”
Bhanu markii uu yaraa wuxuu xisaabta sameyn jiray lix ilaa 7 saacadood maalin-walba marka uu iskuulka ka soo baxo. Balse tan iyo markii uu ku guulestay billada xisaabta, sidii hore ugama shaqeeyo xisaata, wuxuu taa ku badalay in uu ku tiirsanaado Ka shaqeynta xisaabta xilli aan go’nayn. “Waxaan markasta ka fakaraa tirooyinka,” ayuu yiri.
“Waxaan xisaabta sameeyaa iyadoo miyuusig cod dheer daaran yahay, anigoo ciyaarayo kiriket-ka, sababtoo waa xilliyada maskaxdaada aad tababari karto marka aad waxyaabo badan sameyneyso. “Waxaan isku dari karaa tirada lambar kasta ee i dhaafa. Haddii aan qof la hadlaayo, waxaan xisaabin karaa inta goor ee qofkaasi uu ilbiriqsado,” ayuu yiri Bhanu.
Tags: Waa Ninka Keli ee ka Dheereyn Kara Mashiinta Wax Lagu Xisaabiyo
Next post Kaalinta Duqeyda Dhaqanka ee Nabad-dhiska Soomaaliya
Previous post Farriintan Macalinka Qur'aanka iga Gaadhsiiya!